Mmekọrịta - Bezzia | Bezzia
Na mmekọrịta anyị na-ezo aka na njikọ anyị mepụtara na ndị anyị chọrọ ma chọọ ịbụ akụkụ nke ndụ anyị. Ọ bụ ya mere akụkụ a nke Bezzia ji raara onwe ya nye Di na nwunye: igodo, nsogbu ma ọ bụ ndụmọdụ iji nwee ọmarịcha mmekọrịta.
Nke a bụ ihe dị oke mkpa na ndụ ụmụ nwanyị, ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịbụ akụkụ nke tandem nke nwere ike ịdịru ndụ, ọ bụ nzọụkwụ mbụ na ihe buru ibu: ịmụ ụmụ. Ya mere, anyị ga-emesi igodo ndị a ezigbo ibi, nke ga-agabiga na ịdị mma nke onwe, ịmara onye anyị na ya ga-ebi, nghọta ha na ilekọta mmekọrịta ahụ.
Ya mere, na nkebi a anyị ga-akacha enye ndụmọdụ ma gbalịa ime ka ị ghọta mkpa nkwukọrịta ma ọ bụ ịmekọ mmekọrịta anyị.
Ihe ize ndụ nke oké ịhụnanya
por Maria Jose Roldan eme Ụbọchị 4 .
Inwe ike ịhụ mmadụ n'anya bụ ihe magburu onwe ya na ọtụtụ mmadụ nwere obi ụtọ. Otú ọ dị, na ...
Olee otú esemokwu na ọgụ si emetụta ọnọdụ uche nke di na nwunye ahụ
por Maria Jose Roldan eme 1 izu .
Esemokwu ma ọ bụ esemokwu dị n'etiti di na nwunye na-ebutekarị nsogbu dị iche iche na ọkwa nke mmụọ. N'ịlekwasa anya…
Igodo di na nwunye ga-arụ ọrụ
por Maria Jose Roldan eme 2 izu .
Otutu ndi mmadu enweghi obi uto na ihunanya ma na eche kwa, gini bu ihe nzuzo nke ndi ...
Etu esi amata ma ọ bụrụ na di na nwunye emebiela
Ọ bụ ihe dị mma di na nwunye ọ bụla ịnagide oge dị mma na ndị ọzọ dị njọ. Mgbe ụfọdụ, nsogbu na ...
Mmetụta nke oge okpomọkụ na di na nwunye ahụ
Ihe data gosiputara ma gosiputa nke a na obu na mbata nke oge oku, enwere otutu ndi di na nwunye ...
Mkpa ọ dị inwe oghere di na nwunye
Inwe onye gị na ya na-akpa apụtaghị itinye onye ị hụrụ n’anya n’awa iri abụọ na anọ n’ụbọchị. Ọtụtụ oge, ndị ...
5 ihe na-agaghị ekwe ka mmekọrịta
por Maria Jose Roldan eme 3 izu .
Di na nwunye ma obu na nmekorita, enwere otutu ihe nke ekwesighi ikwe ka ha di. Ọ bụrụ na ...
Otú ị ga-esi kwụsị ịhụ onye na-ahụghị gị n’anya n’anya
Ndi odu n̄kpọ emi esibiakde owo akan ndima ima owo en̄wen emi m notdihehe ye enye? Ọ nwere ike ịbịa ...
Otu esi agwa ezi ịhụnanya site na nke na-adịghị mma
por Maria Jose Roldan eme 4 izu .
Ishụnanya dị iche na nchepụta na omume. Ọtụtụ mmadụ na-ahụta ịhụnanya dịka ...
Gini mere na onweghi di na nwunye juru gi?
O nwere ike bụrụ ihe na-achọsi ọtụtụ mmadụ ike, eziokwu ahụ bụ na ọ nweghị ndị mmekọ ha ruru ha ...
Mgbaàmà nke ịda mba mgbe nkwụsị
por Maria Jose Roldan eme 1 ọnwa .
Otu n’ime ihe kacha njọ na ndụ gị bụ ịgbasa onye ị hụrụ n’anya. Enwere ndị ...